३४ लाख नेपाली आँखामा स्वदेशी लेन्स, ५५ लाख उत्पादन, ७० देशमा निर्यात – Health Post Nepal
३४ लाख नेपाली आँखामा स्वदेशी लेन्स, ५५ लाख उत्पादन, ७० देशमा निर्यात
२०७५ मंसिर २६ गते १४:१२
दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि आँखाको कृत्रिम लेन्स उत्पादन गर्दै आएको तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानले ३४ लाख नेपालीको आँखामा स्वदेशी लेन्समार्फत उज्यालो भरिसकेको छ । सस्तो मूल्यमा उच्च गुणस्तरको लेन्स उत्पादनबाट आँखा उपचारको क्षेत्रमा संसारभर देशको प्रतिष्ठा उच्च राख्न सफल प्रतिष्ठानले २२ वर्षअघि नेपाललाई दक्षिण एसियाकै पहिलो लेन्स उत्पादक मुलुकका रूपमा स्थापित गराएको थियो । प्रतिष्ठानले हालसम्म ५५ लाख लेन्स उत्पादन गरिसकेको छ । उत्पादित लेन्स झन्डै आधा विश्वमा निर्यात भइसकेको छ भने हाल १७ मुलुकमा यसका नियमित ग्राहक छन् ।
लेन्स आँखाको भित्री भागमा हुने पारदर्शी वस्तु हो । तर, आँखामा मोतियाविन्दु भएमा लेन्स अपारदर्शी हुन जान्छ । शल्यक्रियापश्चात् लेन्स राख्नुपर्ने हुन सक्छ । नेपालमा तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानले उत्पादन सुरु गर्नुअघि कमजोर आर्थिक अवस्थाका बिरामीको पहुँचमा कृत्रिम लेन्स थिएन ।
तिलगंगाले उत्पादन सुरु गरेपछिको २२ वर्षमा करिब ३४ लाख नेपालीले नेपालमै उत्पादित लेन्समार्फत संसार देख्न पाएका छन् । त्यसअघि महँगो मूल्यको विदेशी लेन्समाथि पहुँच नहुँदा न्यून आयस्तरका नेपालीले शल्यक्रियापश्चात् लेन्स राख्न नसक्दा अन्धकारमय जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था रहेकोे प्रतिष्ठानअन्तर्गत लेन्स उत्पादन विभागका निर्देशक नवीनप्रकाश अधिकारी बताउँछन् ।
कसरी बन्यो नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो लेन्स उत्पादक मुलुक ?
अधिकारीका अनुसार नेपाली नागरिकको लेन्समाथिको दुर्लभ पहुँचको समस्या समाधानको खोजीमा तिलगंगा लागिपर्यो । अस्पतालका डेप्युटी डाइरेक्टर डा. रोहित सैजू र उनका अस्ट्रेलियन साथी डा. फ्रेडलबीच नेपालमै आँखाको लेन्स उत्पादनका विषयमा छलफल भयो । स्वदेशमै लेन्स उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा निम्न आयस्तरका नेपालीको समेत लेन्समा सहज पहुँच पुग्ने उनीहरूको विश्वास थियो ।
डा. फ्रेडलको नामका अस्ट्रेलियामा रहेको फ्रेडल नामक फाउन्डेसनको टेक्निकल सपोर्टमा तिलगंगा अस्पतालमा सन् १९९६ मा आँखाको कृत्रिम लेन्स उत्पादन कार्यको थालनी गरियो । यससँगै नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो लेन्स उत्पादक मुलुक बन्न सफल भयो । लेन्सको सफल उत्पादनपश्चात् तिलगंगाले प्रतिलेन्स १० डलरमा लेन्स बिक्री गर्न थाल्यो । तिलगंगामा गुणस्तरीय र सस्तो लेन्स उत्पादन हुन थालेपछि विदेशी कम्पनीहरूबाट उत्पादित लेन्सको खपत कम हुन थाल्यो । नेपालीले पहिलेको तुलनामा निकै कम मूल्यमा पाउन थालेपछि लेन्समा सबैको पहुँच विस्तार हुँदै गयो ।
अहिले २४० रुपैयाँमा उपलब्ध लेन्स २५ हजारमा किन्नुपथ्र्यो
स्वदेशमा लेन्स उत्पादन हुनुअघि नेपाली बजार अमेरिकन लेन्सले लिएको थियो । त्यसवेला प्रतिलेन्स २० देखि २५ हजार रुपैयाँ मूल्य तिर्न नेपाली बाध्य थिए, जुन आमनेपालीको पहुँचमा थिएन । लेन्स महँगो भएकै कारण धेरै नेपाली संसार हेर्नबाट वञ्चित थिए । त्यसको तुलनामा अहिले स्वदेशमै उत्पादित विश्व बजारमै गुणस्तरीय मानिएको लेन्स नगण्य मूल्यमा उपलब्ध हुँदा आमनेपालीले पनि पैसा अभावमा लेन्सका कारण अँध्यारो जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यता समाप्त भएको छ ।
१०० गुना पुग्यो उत्पादन
उत्पादनको पहिलो वर्ष नेपालमा करिब ५ हजार लेन्स उत्पादन गरिएका थियो । हाल वार्षिक करिब ५ लाख लेन्स उत्पादन हुँदै आएको छ । यस हिसाबले हेर्दा सुरुको वर्षको तुलनामा हाल तिलगंगाले लेन्सको उत्पादन १०० गुना पुर्याएको छ । हाल अस्पतालले विभिन्नप्रकार र गुणस्तरका गरी ५ वटा मोडलमा लेन्स उत्पादन गर्दै आएको छ । मोडलका आधारमा लेन्सको मूल्य पनि फरक छ ।
नेपालमा २४० रुपैयाँ, विदेशमा २० डलर, देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार निर्यात मूल्य
तिलगंगाले नेपालका अस्पतालहरूलाई न्यूनतम २ सय ४० रुपैयाँसम्मा लेन्स बिक्री गर्दै आएको छ । अधिकारीका अनुसार २ सय ४० रुपैयाँमा बिक्री हुने लेन्स सबैभन्दा सस्तो लेन्स हो, जुन प्रायः आँखा शिविरहरूमा प्रयोग गरिन्छ ।
बाहिरी मुलुकहरूमा भने तिलगंगाले २० डलरमा लेन्स बिक्री गर्दै आएको छ । निर्यातका क्रममा देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार लेन्सको मूल्य फरक–फरक बनाइएको छ । आर्थिक रूपमा मजबुत मुलुकहरूलाई बढीे मूल्य लगाउने गरिएको छ भने कमजोर आर्थिक अवस्थाका मुलुकलाई कम मूल्य लगाउने गरिएको छ ।
७० देशमा निर्यात, नियमित ग्राहक १७ देश
तिलगंगाद्वारा उत्पादित लेन्स हालसम्म विश्वका करिब ७० मुलुकमा निर्यात भइसकेको छ । दक्षिण एसियामै आँखाको लेन्स उत्पादन गर्ने पहिलो मुलुक भएका कारण पनि सुरुवाती समयमै नेपाली लेन्स विश्वभर लोकप्रिय हुन समय लागेन ।
चीन, पाकिस्तान, म्यानमार, थाइल्यान्ड, भियतनाम, स्पेनलगायत विभिन्न १७ मुलुक नेपाली लेन्सका नियमित ग्राहक छन् । लेन्स उत्पादन तथा बिक्री भएको दुई दशक कटिसक्दासम्म तिलगंगाले उत्पादन गरेको लेन्सको गुणस्तरमाथि विश्वले कुनै प्रश्न उठाउन सकेको छैन । यसले नेपाली लेन्सको उच्च गुणस्तरलाई दर्साउँछ ।
तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान
संसार देखाउने आँखालाई सधै स्वस्थ राखौं!
भरतपुर अस्पतालले आँखा उपचार सेवा सञ्चलान गर्दै
आँखामा आउने स्टाई (आनो) के हो, यसको निदान कसरी गर्न सकिन्छ?
प्रत्येक दिन १ सय २५ जनाले दृष्टि गुमाउँछन्
नेत्ररोग विशेषज्ञ सुवेदीलाई ‘आई हेल्थ हिरो अवार्ड’
यी ९ लक्षण जसले आँखाको समस्या संकेत गर्छन्
आँखालाई स्वस्थ राख्न अपनाउनुहोस् १० टिप्स